UZE Agagharị: Ebe Ahịa nke Ahịa Maka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi N'èzí | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 27, 2020 Fraịdee, Nọvemba 27, 2020 Douglas Karr
N'oge ọrịa a, ahịa mgbasa ozi nwere nnukwu nsogbu. N'ezie, atụmanya, mana 19.1% dobe na H1 220 bụ mmetụta dị njọ maka azụmaahịa. COVID-19 agbanweela ebe ndị na-azụ ahịa, ebe ọ nwere ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ nke ndụ a na-adị kwa ụbọchị. Ndị mmadụ na-eme njem obere ma na-emefu obere. Ọrịa ọjọọ a ga-agabiga na ọnwa ole na ole na-esote, mana ọnwa ndị a emeela mgbanwe ndị bụ isi na-apụta na ụwa mgbasa ozi.
Ekwentị mgbasa ozi na-agbakọta. Ndị na - egbochi mgbasa ozi na ezubere iche na - adịghị mma emewokwa ka ndị na - akpọsa ngwa ahịa ọtụtụ ijeri ego furu efu. Nke ahụ na-akpali ha ile anya na ọwa ndị na-abụghị ngwaọrụ. Mbipụta mgbasa ozi na - adalata n'ike, yana amụma mgbasa ozi adaba site na amụma 2025 ka ọ bụrụ ihe ruru otu ụzọ n'ụzọ ise nke ndị 2012.
Mgbasa ozi n'èzí na-enye ụfọdụ isi uru: mmụba dị elu (ị nweghị ike ikwu Mgbasa ozi ma ọ bụrụ na ọ dị n'ihu gị), obosara iru, na oke. Agbanyeghị, ọ bụghị ọwa niile dị njikere ijere ahịa 2020 na-agafe. Mpempe akwụkwọ na-agbanwe agbanwe na-aghọ ihe gara aga, mana ọ na-apụ n'ụlọ (OOH) na ọ kachasị ụlọ apụ apụ dijitalụ (DOOH) mgbasa ozi na-elewanyewanye anya ịbụ ihe ọdịnihu. Akụkụ DOOH nke mkpokọta OOH zuru oke si na 17% ruo 33% n'ime afọ ise gara aga.
UZE Agagharị: Isi
Ntọala nke Alexander Jablovski na Germany, onye agha nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala na ọkachamara na ọgba aghara mmegharị, UZE, dị ka aha ya na-egosi, na-eweta agagharị na ngalaba AdTech, yana ọgụgụ isi na teknụzụ ihe mmetụta.
A na-ahụkarị ụgbọ njem dị ka akụkụ dị iche iche maka ibugharị ngwongwo ma ọ bụ mmadụ site na isi A ruo ebe B. Ihe anyị chọpụtara n'oge na-ewu UZE bụ na njem na-eweta usoro ọhụụ ọhụụ maka ndị mgbasa ozi. Na UZE, anyị na-agbaji mkpọda ọnụ ahịa gafere uru bara uru iji ruo n'ahịa a na-emeghebeghị gụnyere ihe karịrị ụgbọ ala azụmahịa 17 nde iji jee ozi naanị na US.
Alexander Jablovski, CEO / CTO na ngalaba-onye guzobere UZE
Maka naanị 3% nke mgbasa ozi na US bụ OOH, ihe karịrị 300 nde ndị ahịa nwere ike erutebeghị oge ha hapụrụ ọnụ ụzọ ụlọ ha. Site n'iji ugbo ala dika mbadamba ihe dijitalụ, UZE na-achota na ndị mgbasa ozi nwere ike iru ndị ahịa ọbụlagodi ka ndị mmadụ na-agbagharị mgbe niile n'ihi COVID-19 Ugbo ala nwere ngwa UZE (akụrụngwa nke ụlọ ọrụ ahụ) ma ọ bụ bọọdụ mkpọsa dijitalụ nke atọ ga-enwe ike ịlele ndị ahịa na-arụ ọrụ mpaghara ma ọ bụ ọbụna na-agagharị nkịta ha.
Na mgbakwunye na ịnweta ikike n'ihu ịnweta mgbasa ozi n'ihu ndị ahịa mgbe ha nọ na-azụ ahịa, dị ka nyocha na-egosi na ha nọ n'azụ wiil n'oge ọrịa ahụ na-efe efe, UZE na-ebutekwa ihe ngwụcha ngwụcha iji gbochie ụdị nsogbu DOOH na-echekarị. .
UZE enwewo ike ịchụ ahịa ndị mgbasa ozi site na iji data sensọ nke na-enyere anyị aka ịkọwapụta mgbasa ozi ziri ezi. Dabere na data ndị na-adịbeghị anya, a na-atụgharị ahịa mgbasa ozi dijitalụ na-eto eto 40% karịa afọ ise na-esote na US
Cindy Jeffers, Onye isi ala US na COO, UZE Mobility
Ndị a bụ ụfọdụ ụzọ ndị ọzọ dị mkpa nke ụlọ ọrụ ahụ, nke na-eme US mbụ ya na New York City, na-agbagha ụdị nsogbu ịma aka DOOH.
UZE na-achịkwa usoro ahụ dum, site na ịmepụta ahịa maka ndị mgbasa ozi na ịmepụta AI na ihe mmetụta maka ịchụ nta.
Usoro a belatara oge ịzụ mgbasa ozi site na 92%
Akụrụngwa nwere nha ihu igwe na-egosi na ndị mgbasa ozi agaghị agbanwe ọdịnaya ha.
Sensọ na-agwa mpempe akwụkwọ ihe niile site na ihu igwe ruo n'ụdị agbata obi, yabụ ị ga-ahụ mkpọsa ice cream na ụbọchị ọkụ na nche anwụ n'oge a na-asa mmiri. Ka ugbo ala na-aga, sịnụ, Fifth Avenue, mgbasa ozi ndị ahụ ga-agbanwe na ngwongwo ndị ahịa dị oke ọnụ.
Akụrụngwa ahụ na-enye ohere maka ọnụọgụ na nsonaazụ mgbasa ozi.
UZE soro na Hövding iji kwalite igwe ikuku ikuku ha maka ndị na-agba igwe. Mgbe ị gbasịrị igwe kwụ otu ebe nwere nnukwu ihuenyo site na ụzọ igwe kwụ otu ebe na Berlin, na-enyefe mgbasa ozi ziri ezi nye onye na-azụ ya n'oge kwesịrị ekwesị, Hövding hụrụ na ahịa weebụ wụlitere na 38%.
Ahịa ụlọ anyị mụbara 20% mgbe anyị na UZE rụ ọrụ naanị ọnwa abụọ. Anyị nwere ike iru a ọhụrụ, ukwuu kpaliri asịwo ahịa. Arụ ọrụ na UZE agbanweela ụzọ anyị si akpọsaa na-akpọrọ anyị gafee ọdịnala ọdịnala dịka ama ma ọ bụ mgbasa ozi n'ịntanetị nke dabere na email.
Adele Martens na Century21 Real Estate na mbido ahịa UZE
Ibido dị mfe. Ndị ahịa UZE nwere ọmalị ahịa na ndị dijitalụ na ndị ọkachamara n ’ụlọ nọ ebe a iji nyere gị aka na mkpọsa gị. I nwekwara ike melite mkpọsa gị ozugbo na UZE Marketplace. Nweta ngwa ahịa UZE site na ndị na-eweta ndị ọzọ 3rd, DSPs na mgbanwe mgbasa ozi. Bido taa n’uzo ohuru nke ime mkpọsa n’ime ụlọ.
Gaa Leta UZE Maka Ozi Ndị Ọzọ
Tags: aiAlexander JablovskiAmamịghe echicheakpakanamdemgbasa ozi na-akwụ ụgwọdijitalụ pụọ n'ụlọdoohmobile mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozin'èzí mgbasa oziobodo mara mmasmart obodo mapuzeUZE Ahịauze agagharịweather
Otu esi eme ka ahia ahia gi di nma na iji ahia ndi ahia